यस्तो मौका अव देउवालाई कहिल्यै आउने छैन - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
यस्तो मौका अव देउवालाई कहिल्यै आउने छैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिमण्डल इतिहासकै ठूलो भएकोमा आम जनतालाई गर्भ लागेको छैन ,उल्टै आक्रोस पोख्न थालेका छन् । आफु प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको दिनदेखि देउवाले मन्त्री मण्डल विस्तार गर्ने काम मात्र सबैले उपलब्धीको रुपमा हेरेका छन् । यो पटक चार सदस्य थप गर्दै देउवाले पाँचौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् ।
यसअघि २०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले ५२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर रेकर्ड बनाएका थिए । २२ वर्षपछि सर्वाधिक ठूलो मन्त्रिपरिषदको रेकर्ड देउवा आफैले तोडेका छन् । यसभन्दा अघिल्लो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा ५० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । ०६८ मा डा. बावुराम भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए ।
मन्त्री मण्डल जम्भो बनाएर देशको राजनितिक अस्थिरताले गति लिने पनि होईन । केही नयाँ विकास थपिने पनि होईन । देउवाको यो मन्त्री मण्डल विस्तार गर्ने रणनितिका जनता खुसी छैनन् ,बरु भएका सबै ६ सय १ सांसद मन्त्री बनाएर देशको ढुकुटी रित्याउ भनिराखेका छन् ।
अहिलेको यी मन्त्री मण्डलले खाने तलब त्यी तराईका बाढी पिडित बस्तिलाई वितरण गरिदिएको भएपनि नेपाली कांग्रेस तराईका बासिन्दाका लागि भगवान् सावित हुन्थ्यो । गन्न नै गाह्रो हुने ५४ मन्त्री मण्डलका मन्त्रीहरुले गर्ने काम सबैभन्दा कम मन्त्री मण्डल भएको सरकारले गर्ने काम फरक हुने पनि होईन । कति जनताले देउवाको यो पछिसम्म राजनितिक खेल खेल्ने आफ्नो स्वार्थ हो हो भन्न थालेका छन् । नजिकै तराईमा स्थानिय तहको तेस्रो चरणको चुनाव आईरहेको छ यता मन्त्री मण्डल आचारसंहिता तोडेर विस्तार गरिएको छ ।
नेपालको राजनिति खेल पनि कस्तो ,उच्च ओहोदाका भनाउँदाहरुले जे गरेपनि कानुन नलाग्ने सर्वसाधारण कसैको वारेमा कुरा काटेपनि कानुन लाग्ने । के राजनिति गर्नेका लागि मात्र हो कानुन ? जनताले कहिले आफुखुसी बाँच्न नपाउने ? यो देशको कानुनको प्रयोग गर्नु सबैको कर्तव्य होईन ?
अव भएभरको जनताको रगत पसिना नेताहरुले खाने यो देशका जनता के आलु खाने ? मन्त्रि मन्त्रिलाई परिचय नभएको मन्त्रि मण्डलले अव प्रगति गरेर देखाउने हो ? अव त कांग्रेस भित्र नेताको खडेरी परेर अरु अरु पाटी पनि प्रवेश हुन थालेको चाल जनताले पाए । देशको पुरानो पार्टी भएर गुनाम गर्न देउवा सरकारलाई के रहर चलेको होला ? देश विकासको साटो देश खाने नेताहरुको विकास भएपछि अव जनता कसरी सन्तुष्ट हुन्छन् ?
नेताहरु झुटा आश्वासन लिएर् घरी घरी भोट हालिदिन भन्दै घर आँगनमा आउँदा अव के दिन्छन् ,नेपाली जनताहरु ? राणाहरुले स्वतन्त्र हुन दिएन ,शाहाहरुले आफु आफु यसरी खाएपनि केही अंश त जनताले पाएको महसुश हुन्थ्यो तर अहिले त जनता भन्दा नेता पालनपोषण गनुपर्ने दुर्भाग्य आयो नेपालीलाई । भोट माग्दा पनि लाज मान्नुपर्ने थियो यो पनि पचाईसकेका रहेछन् ,गुनाम नेताहरुले । नेपाल पाटी अनलाईनले सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा देउवाको जम्भो मन्त्रि मण्डललाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ भनि हामीले साधेका थियौं । हेरौं जनताका यी विचारहरु ।
राजनितिक दलहरु जति सबै आफ्नै स्वार्थको राजनितिमा अलमलिएरका कारण जनतालाई हाता लागो शुन्य को स्थिति यथावतनै रहेको छ । जव चुनाव आँउछ देश म आफु एक्लै बनाउछु भन्ने जस्ता सपना जनता माझ फैलाई चुनावी सेरोफेरोबाट मुक्त भएपछि देश जनताको लागि उलेख्य काम गर्न नसकेकोप्रति आम नेपाली जनता रुष्ट भई राजनितिलाई नेताको गरि खाने भाँडोको संज्ञा दिन थालिसकेका छन ।
नयाँ संविधान निर्माण नभई तराई मधेसमा आन्दोलनको वितण्डा मच्चाएर नयाँ संविधान प्रति रुष्ट हुदै आएको मधेसी मोर्चा अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकामा भएपनि सरकारमा हुनुनहुनुको कुनै औचित्यता महशुस गरिरहेको छैन । सरकार भने आफु के गर्दा बलियो भईन्छ भन्ने दाउका साथ साना तिना राजनितिक दललाई सरकामा च्यापी अल्मल्याएर बस्नैमा व्यस्त देखिन्छ । यस्ता यावत घटनाक्रमले नत देशले नै निकास पाँउने छ नत आर्थिक समृद्धि नत स्थिर राजनितिनै ।
नेपालको राजनितिक विषय भारतको प्रमुख चासो र वहसको विषय बन्ने गरेको र नेपालमा हरेक राजनितिक गतिविधिमा नेपालले भारतसँग हार गुहार माग्दै उसका निति नियम बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएकोले अव जनता सबै राजनितिक दलदेखि रुष्ट बनिसकेका छन् । अहिले जनताले सो अनुरुप कुनै राजनितिक दल नेपालमा देखा परेको छैन । वर्तमान सरकार र सरकारको काम सत प्रतिशत सहि हो भन्नेहरु अहिले गुमनाम छन् । किनकी सरकारले अहिले न काम नै गरेको छ न काम गर्छु भनेर आश्वासन नै दिएको देखिन्छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीको स्वागत नेपालमा हुन सकेको छैन भारतमा दिपावली हुनुमा हामि जनताले के बुझ्नु ?
कुरा भारत भ्रमणको, के थ्यो त्यो भ्रमणको उपलब्धि हुने वाला र त्यत्रो संख्यामा सदृश्य लानु पर्ने । नेपालको स्वाभिमानमा नै आँच आउने गरि गरिएको भ्रमण बाट के अपेक्षा गर्ने नेपाली जनताले ? नेपाल कति नै धनि छ र ? के नेपालमा सम्भावना छैन र ? कि नेपाल सक्षम नै छैन भन्न खोजेका हुन्। नेपालबाट दैनिक १० हजार नेपालि युवा विदेशीएका छन् ।
सकिन्छ भने नेपालमै उद्योग खोलियोस् सरकार किन अफगानिस्तान र इराक मा रोजगरिको लागि खुल्ला गर्नु पर्यो ? नेपालको विगत हेर्ने हो भने हेटौडाको जुट मिल , जनकपुरको कपडा उद्योग अहिले कता गयो ? खै त्यो ? अरु देशको उन्नति हून्छ प्रगति हुन्छ तर नेपालको अवनति किन ? यो के को कारण देखिएको समस्या हो ? समस्या उठान मा हामि जनता भन्दा नेता बढि सिपालू छन् । तर कसले खोज्यो समाधानको विषय ?
अन्य देशका नागरिक सरकारि सुरक्षामा बस्छन र सरकारद्धारा आफु सुरक्षित रहेको अनुभुति गर्दछन् । हाम्रो देशमा जनता सरकारबाट नै असुरक्षित छन् ,भन्दा सायद गल्ति हुँदैन जस्तो लाग्छ । सरकारको कुन चाहिँ कामले जनताले म सुरक्षित छु भनेर निर्धक्क भन्न पाएका छन् ? हामीले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको शासनपछि माधब कुमार नेपालको सासन अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सासन अनि के पि ओलीको पनि शासन हेर्यौँ तर काम कसैले सम्झन लायक गरेनन् ।
देशमा तिब्र विकास, आर्थिक समृद्धि, शान्ति र सुव्यवस्था, बेरोजगारी समस्याको निराकरण, जलविद्युत उत्पादन, कृषि क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लगायतका महत्वपुर्ण कुरामा सरकारले अग्रज भुमिका खेल्नुपर्नेमा आलोपालाको सत्ता केन्द्रित राजनितिले देशलाई अग्रगतिमा लैजान सकिरहेको छैन ।